सुरेश तामाङ, काठमाडौं । हिउद होस या बर्षाको समय । यी दुबै समय प्रायः जसो सडक अबरुद्ध भैरहन्छ । वर्षातको समयमा त पहिरो आउने र भत्कने नै भयो । तर
चार दिनदेखि देशैभरि फैलियो, फ्लु परीक्षण टेकुमा मात्र ?
भगवती तिमल्सिना ही दिनदेखि काठमाडौंमा मनसुनसँगै देखा पर्ने एचवान एनवान ए र बी इन्फ्लुएन्जाजस्तो देखिने रुघाखोकी सरुवा रोगको रूपमा देखापरेको छ। यो समस्या ४ दिनदेखि व्यापक मात्रामा फैलिएको शुक्रराज ट्रपिकल
रोशन पराजुली, हेटौडा । मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाले गर्भवतीको स्वास्थ्य सुधारमा आफूले पनि लगानी गरेको छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधासँगै गाउँपालिकाले समेत थप्दा कुल ७ हजार २ सय रुपियाँबराबरको सुविधा
भगवती तिमल्सिना । विवाहित महिला गर्भवती हुनु र स्वस्थ बच्चा जन्माउनु नेपालको संविधान–२०७२ मा नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ। तर नेपाल गरिबी र अभावमा गुज्रिएको आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर मुलुक
जेठी नायिकाका कान्छा हिरो
रश्मी थापा, जब फिल्म सोनुके टिटुकी स्वीटी सय करोड क्लबमा प्रवेश गर्यो, बलिउड नायक कार्तिक आर्यनको भाग्य पनि बल्न थाल्यो। शुरूमा नायिका करिना कपुरसँग र्याम्प वाक गरेका उनी अब छिट्टै
टोरन्टो, (एजेन्सी) स्टीफानोस सितसिपास ग्रीसका नम्बर एक टेनिस खेलाडी हुन् । २० वर्षीय सितसिपास वर्तमान एटीपी टप–१०० भित्रका तेस्रो सबैभन्दा युवा र ग्रीसका एकमात्र खेलाडी हुन् । उनी ओपन एरामा
-मोतीराम तिमल्सिना काठमाडौं उपत्यकामा राति ८ बजेपछि मात्रै ट्रिपर चलाउने निर्णय भएसँगै सडक दुर्घटना केही कम भएपनि अन्य प्रकारका समस्या निम्तिन थालेका छन् । उपत्यका प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाबाट
समयले दिएको प्रविधिको प्रयोगबाट अब विदेशमा बसेर पनि नेपालमा रहेका बूढा बाबुआमाको उपचार गर्न सकिने भएको छ। हातमा प्रविधि बोकेर समयलाई अत्यन्तै सदुपयोग गर्ने समुदायका लागि घरघरमै डकनकले डाक्टर, औषधी,
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाका प्राडा गोविन्द केसीसँग १५औं अनशन तोड्ने क्रममा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसारको काम आइतबारदेखि शुरू गरेको छ। सरकारले डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड
-भगवती तिमल्सिना उच्च श्रेणीमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि यस वर्ष देशैभरि आवेदन खुला गर्ने र आवेदन लिई परीक्षा लिने कार्य धमाधम चलिरहेको छ। अभिभावकको चाहना र
सुनील महर्जन रिहा महर्जनले सुन्न सक्दिनन्। सुन्न नसक्ने यी छोरीसँगै बसेर नै आमा मणि महर्जनले पढाइको महत्व बुझिन्। पढाइ छाडेको १५ वर्षपछि उनले प्रवेशिका परीक्षा दिइन्। हाल एमएम दोस्रो वर्षमा
अटेरी जनता र मूकदर्शक प्रशासनले बिगारे राजधानी कै बस्तीहरू
आकाश घिमीरे, काठमाडौँ । हामीले नेपालमा यस्तो ठाउँ जहाँ भै परी आउँदा अत्यावश्यकीय कुरा, जस्तै स्थानीय स्तरका दमकल, अस्पताल र प्रहरी जस्ता सबै सेवा पाइने एउटा मात्र पनि बस्ती देखेको
ई. राम कुमार ठाकुर, अध्यक्ष –भष्ट्राचार विरुद्ध नेपाल’ का अध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल बढी भष्ट्राचार हुने मुलुकको सुचीमा १ सय २२ औं स्थानमा छ । तर भष्ट्राचार भएका अपवाद
कमल ढकाल, ‘१२ छोरा १३ नाति बुढाको धोक्रो काँधैमाथि’ बुढापाकालाई संकेत गरेर भनिने यो उखान कति वर्षको उमेरलाई काम लाग्ला? औसत आयु ६४ पुगेको यो मुलुकमा त्योभन्दा माथिको वर्ष त
रश्मी थापा, यतिखेर नेपाली गीतसंगीतमा हिन्दू नारीहरूको पर्व तीजको प्रभाव छ। नेपाली लोक गीतसंगीत तीजमय बनेको छ। यो मौसममा तीज गीतहरूको बाढी नै आइरहेको छ। लोक तथा दोहारी गीतको क्षेत्रमा